ओली ज्यू, रहस्यमय दासढुंगा रिपोर्ट कहाँ छ ? सत्तामा हुदाँ किन खोजिएन हत्यारा !::Pathivara News
गोकर्ण बराल , काठमाडौँ । दासढुंगा हत्या घटना भएको आज २५ वर्ष पुगेको छ । तर पनि त्यो घटना रहस्यमय नै छ । त्यो सुनियोजित हत्या थियो या दुर्घटना त्यो भने रहस्यमयकै विषय बनेको छ । एमालेका अध्यक्ष केपी ओली तथा एमाले उपाध्यक्ष एवं मदन पत्नी विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुई-दुई पटक भए तर पनि उनीहरुले यो घटनाको छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने शब्दको किन उच्चारण समेत गरेनन् त्यो प्रश्न अहिले धेरै आम मानिसहरुको जिज्ञासाको विषय बनेको छ । २०५० साल जेष्ठ ३ गते चितवनको दासढुंगामा भएको जीप दुर्घटना नेपाली राजनीतिक इतिहासमा पहेलीकै रुपमा छ ।
अहिले यो घटना रहस्यमयको विषय बनेको छ । अमर लामालाई लखेटी लखेटी गोली हानेर मार्ने शक्ति को थियो ? हत्या किन गरियो ? त्यो काण्ड राष्ट्रियस्तरमा क्षति पुर्याउने गम्भीर षड्यन्त्र थियो । राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा नेपालमा राष्ट्रवादी सोच राख्ने व्यक्तिहरुको अन्त्य कि त राजनीतिक रुपमा एक्ल्याएर कि त दुर्घटना निम्त्याएर गरिएको छ ।टंकप्रसाद आचार्य र डिल्लीरमण रेग्मीलाई एक्ल्याएर सिध्याइयो ।रास्त्रबादी नेताले नेपालमा ढुक्कले राजनीतिक सुतिखेती चलाउन पाएका छैनन् । वी.पी कोइराला, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी, मरिचमान सिंह श्रेष्ठ यसका उदाहरण हुन् । मदन भण्डारीको राष्ट्रप्रेम त अझ एक कदम अघि थियो ।